Qofka muslimka ah wuxuu si qaldan u qiraa in ilaahay yahay ilaahay.
Tiktok waxaan uga hadlayaa Ilaaha kitaabiga ah iyo Wiilkiisa Ciise Masiix, laakiin waxaan had iyo jeer canaan ka helaa dadka muslimiinta ah oo dhaha in ilaahey yahay ilaahey. Si kale haddii loo dhigo, waxay diidaan Ilaaha kitaabiga ah waxayna sheeganayaan ilaah ka baxsan kitaabiga.
Caqiidada muslimiintu waxay ka kooban tahay qirashada qofka rumaysadkiisa Eebbe inuu yahay Ilaaha keliya.
Qof kasta oo doonaya inuu Muslim noqdo waa inuu ku dhahaa ereyada soo socda hortooda ugu yaraan laba markhaati oo muslimiin ah:
"Ma jiro ilaah laakiin Eebe iyo Muxammad waa uu nebigii."
Caqiidada muslimiinta, qofka muslimka ahi wuxuu qirayaa in Eebbe yahay Ilaah.
Caqiidadu waxay raacdaa qofka muslimka ah noloshiisa, waxaa loogu yeeraa dhagaha dhallaanka waxaana lagu celceliyaa sariirta dhinta waana in la doorbido qof muslim ah oo mu'min ah maalin walba waana ku celcelinta waana salaada.
Waxaan ku aragnaa caqiidada muslimka inuusan muslimka qiraynin Ilaaha kitaabiga ah, laakiin ilaah quraanka, allaah. Meel Kitaabka ka mid ah kuma qorna in Ilaah loogu yeedho Allaah. Waxay sidaas ku andacoodaan ilaah ka baxsan kitaabiga ah.
Ilaah wuxuu leeyahay Wiil
Ilaaha Quraanka, Eebbe malaha Wiil keligiis dhashay oo uu u soo diray si uu dunida u badbaadiyo, laakiin Kitaabka Quduuska ah wuxuu leeyahay Wiil - Ciise Masiix. Tani waxay caddeyn dheeraad ah u tahay in kuwani ay yihiin laba ilaahyo kala duwan iyo in Eebbe uusan ahayn ilaaha kitaabiga ah.
Tarjumaad aan sax ahayn
Ogsoonow in caqiidada kor lagu soo sheegay si sax ah looga tarjumay Carabi. Ma dhaho:
"Ma jiro ilaah , laakiin Ilaah iyo Muxammad waa uu nebigii."
Tarjumaad noocan oo kale ah maanta waxaa sameeya dad badan, laakiin waa tarjumaad aan sax ahayn, qalloocan oo been ah. Haddii qofku leeyahay tarjumaad noocan oo kale ah, qaar badan ayaa si khalad ah u rumaysan kara inay tahay Ilaahay kitaabiga ah.
Sidoo kale, qofka muslimka ahi markuu dhaho "ilaah", ma aha inuu ula jeedo Ilaaha kitaabiga ah ee waa Alle. Sababtoo ah Allah waa calaamadda sinnaanta iyo Ilaaha Kitaabka Quduuska ah, waxaad u maleyn kartaa inay tahay isla ilaah, laakiin maahan.
Waa khiyaano foolxun in turjumaada caqiidada si khaldan loo saameeyo maskaxda dadka taas oo ku saabsan isla ilaah.
"Allah" waa magac ilaah
Hadda qof ayaa yidhi "Eebbe" macnaheedu waa "Ilaah". Waxaa loo tarjumi karaa sidaas dadka qaar, laakiin ereyga "Allah" waa magac ilaah. Tusaale ahaan, Ilaaha Kitaabka Quduuska ah waxaa lagu magacaabaa RABBIGA - YHWH. Weligeed kuma qorna Kitaabka Quduuska ah in magaciisu yahay Allaah.
Laakiin haddii "Eebbe" macnaheedu yahay "ilaah" markaa muxuu eray kale oo caqiidada ka mid ahi u leeyahay "ilaah" in la yiraahdo ilaahay waa ilaah?
"Ma jiro ilaah [Ilah] mooyee Ilaahay [Allaah] iyo Muxammadna waa nebigiisa."
Waxaan markaa aragnaa in caqiidada ay eray u leedahay "ilaah" iyo in "Allah" uu yahay magac ilaah.
Lama turjumi karo "Allaah"
Waxaan qornay inay khalad tahay in caqiidada lagu turjumo "ilaah kale ma jiro ilaah mooyee", laakiin waa si qalad ah in loo turjumo "ma jiro Alle mooyee Allaah kale".
Taasna, waxaa lagu caddeeyey in "Eebbe" uu yahay magacaas oo qofka muslimka ah uu si qaldan u qirayo in uu Eebbe yahay Ilaah.
Rabbigu waa Ilaah
Qirashada Baybalka waa in uu yahay RABBII kan ilaahay, oo reer banii israa'iil ay ku dhawaaqeen markay fahmeen in Bacal uusan ahayn ilaah.
1 Kings 18: 21: "Eliiyaah wuxuu u muuqday dadka oo dhan, oo wuxuu ku yidhi, Ilaa goormaad kala joojinaysaan laba fikir? Haddii Rabbigu Ilaah yahay, isaga raaca. Laakiin hadday tahay Bacal, isaga raaca. "Laakiin dadku hadal uguma jawaabin."
1 Kings 18:39: "Oo dadkii oo dhammuna markay taas arkeen ayay wejiga dhulka dhigeen, oo waxay yidhaahdeen, Rabbigu waa Ilaah. Rabbigu waa Ilaah.
Waa la badbaadiyey oo la badbaadiyey
Si loo badbaadiyo oo loo badbaadiyo, Axdiga Cusub ee Kitaabka Quduuska ah wuxuu leeyahay mid waa inuu markaas qirto inuu Ciise yahay Rabbiga.
Rooma 10: 9. Waayo, haddaad afka ka qiratid inuu Ciise yahay Rabbi, oo aad qalbiga ka rumaysatid in Ilaah isaga ka sara kiciyey kuwii dhintay, waad badbaadi doontaa.
Saaxiibkay, aqbal ciise una qiro inuu Sayid yahay. Markaas waad badbaadi doontaa oo badbaadi doontaa.
Waa Rabbiga kan Ilaah ah.
Vecka 19, lördag 15 maj 2021 kl. 04:49